Ndị Italitali abụọ nke narị afọ nke iri abụọ na-aga n'ihu n'ụzọ nke ịdị nsọ | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ndị Italitali abụọ nke narị afọ nke iri abụọ na-aga n'ihu n'ụzọ nke ịdị nsọ
Mmadụ abụọ ndị Italiantali ha na ha dịkọrọ ndụ, onye ụkọchukwu na-eto eto nke guzogidere ndị Nazi ma gbuo ya ma gbuo ya, na seminarị nke nwụrụ afọ 15 site na ụkwara nta, ha abụọ nọ nso ịbụ ndị akpọrọ ndị nsọ.
Pope Francis gafere ihe na-akpata iti ihe banyere Fr. Giovanni Fornasini na Pasquale Canzii na 21 Jenụwarị, tinyere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị isii ndị ọzọ.
Pope Francis kwupụtara Giovanni Fornasini, nke onye uwe ojii Nazi gburu mgbe ọ dị afọ 29, nwụrụ n'ihi okwukwe ya na asị ọ kpọrọ okwukwe.
A mụrụ Fornasini na nso Bologna, Italy, na 1915, nwee nwanne nwoke nwoke tọrọ. Ekwuru na ọ bụ nwa akwụkwọ dara ogbenye na mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ rụrụ ọrụ nwa oge na nwatakịrị na-ebuli elu na Grand Hotel na Bologna.
O mechara banye seminarị wee bụrụ onye ụkọchukwu na 1942, mgbe ọ dị afọ 27. Na homily ya na uka mbụ ya, Fornasini kwuru, sị: "Onyenwe anyị ahọrọla m, onye nzuzu n'etiti ndị nzuzu."
Agbanyeghị na ọ bidoro ọrụ ụkọchukwu ya n'etiti nsogbu nke Agha Secondwa nke Abụọ, Fornasini nwetara aha dị ka onye ọrụ aka.
Ọ mepere ụlọ akwụkwọ maka ụmụ nwoke na parish ya na mpụga Bologna, na obodo Sperticano, yana enyi seminarị, Fr. Lino Cattoi, kọwara nwa okorobịa ahụ ụkọchukwu dị ka “o yiri ka ọ na-agba ọsọ mgbe nile. Ọ nọ mgbe niile na-anwa ịhapụ ndị mmadụ na nsogbu ha ma dozie nsogbu ha. Ọ tụghị egwu. Ọ bụ nwoke nwere okwukwe siri ike na a maghị jijiji ”.
Mgbe onye ọchịchị aka ike Italiantali Mussolini kwaturu na July 1943, Fornasini nyere iwu ka akụ mgbịrịgba ụka ahụ.
Alaeze oftali bịanyere aka na ndị agha niile na Septemba 1943, mana ugwu ugwu Italy, gụnyere Bologna, ka nọ n'okpuru ọchịchị Nazi Germany. Isi mmalite banyere Fornasini na ọrụ ya n'oge a ezughi oke, mana a kọwara ya dị ka "ebe niile" ma amaara na ọ dịkarịa ala otu oge ọ nyere ebe mgbaba na rectory ya ndị lanarịrị otu n'ime bọmbụ atọ nke obodo ahụ site n'aka ndị Allies. ike.
Fada Angelo Serra, onye ụkọchukwu parish ọzọ nke Bologna, chetara na “n’ụbọchị mwute nke Nọvemba 27, 1943, mgbe ndị ogbunigwe ha na ndị enyi ha gburu mmadụ 46 n’ime ndị ụka m na Lama di Reno, echetara m Fr. Giovanni rụsiri ọrụ ike na mkpọmkpọ ebe ya na pickaxe ya dị ka a ga-asị na ọ na-anwa ịzọpụta nne ya. "
Sourcesfọdụ isi okwu na-ekwu na onye ụkọchukwu ahụ na-eto eto na-arụ ọrụ na ndị otu Italy ndị agha ndị Nazi, ọ bụ ezie na akụkọ dị iche na ogo nke njikọ na ndị agha.
Sourcesfọdụ isi akụkọ na-akọkwa na o tinyere aka n'ọtụtụ oge iji chekwaa ndị nkịtị, ọkachasị ụmụ nwanyị, site na mmeso ọjọọ ma ọ bụ site na ndị agha German.
Isi mmalite na-enyekwa akụkọ dị iche iche nke ọnwa ikpeazụ nke Fornasini na ọnọdụ nke ọnwụ ya. Fada Amadeo Girotti, ezigbo enyi Fornasini, dere na e kwere ka onye ụkọchukwu ahụ na-eto eto ka o lie ndị nwụrụ na San Martino del Sole, Marzabotto.
N’agbata 29 Septemba na 5 Ọktoba 1944, ndị agha Nazi gburu ogbugbu ma ọ dịkarịa ala ndị nkịtị 770tali dị XNUMX n’obodo ahụ.
Dabere na Girotti, ka o nyesịrị Fornasini ikike ili ndị nwụrụ anwụ, ọfịsa ahụ gburu onye ụkọchukwu ahụ n'otu ebe na 13 Ọktoba 1944. Achọpụtara ozu ya, gbara ya n'obi, n'echi ya.
Na 1950, onye isi ala posttali mgbe o nwesịrị onyinye nyere Fornasini Nrite ọla edo maka agha agha nke mba ahụ. Emeghere ihe kpatara ya maka iti ihe na 1998.
Naanị otu afọ tupu Fornasini, a mụrụ nwa nwoke ọzọ na mpaghara ndịda dị iche iche. Pasquale Canzii bụ nwa mbụ amụrụ nye ndị nne na nna raara onwe ha nye bụ ndị gbalịsiri ike ruo ọtụtụ afọ ịmụ ụmụ. A maara ya site na aha ịhụnanya "Pasqualino", site na nwata ọ nwere mmụọ dị jụụ na ntụgharị uche maka ihe nke Chineke.
Ndị mụrụ ya kụziiri ya ikpe ekpere na iche banyere Chineke dị ka Nna ya. Mgbe nne ya kpọọrọ ya gaa ụka, ọ na-ege ntị ma ghọta ihe niile na-eme.
Ugboro abụọ tupu ụbọchị ọmụmụ ya nke isii, Canzii nwere ihe mberede na ọkụ nke gbara ihu ya, ma oge ọrụ ya na anya ya enweghị mmerụ n'ụzọ ọrụ ebube. N'agbanyeghị na ọ merụrụ ahụ nke ukwuu, n'ọnọdụ abụọ ahụ ọkụ ya mechara gwọọ kpamkpam.
Ndị nne na nna Canzii mụrụ nwa nke abụọ ma ka ọ na-agba mbọ igbo mkpa ezinụlọ, nna nwata ahụ kpebiri ịkwaga United States maka ọrụ. Canzii gaara agwa nna ya akwụkwọ ozi, ọ bụrụgodi na ha agaghị ahụ ọzọ.
Canzii bụ nwa akwụkwọ ihe nlere ma bido ije ozi n'ebe ịchụ ụka parish dị n'ógbè ahụ. Ọ na-esonye na ndụ okpukpe nke parish ahụ, site na Mass ruo novenas, na rosary, na Via Crucis.
N'ịbụ onye kwenyesiri ike na ya nwere ọrụ ọkwá, Canzii banyere seminarị diocesan mgbe ọ dị afọ 12. Mgbe a jụrụ nwata ahụ okwu nlelị maka ihe kpatara ọ na-eji agụ akwụkwọ maka ọkwa nchụ-aja, nwata nwoke zara: “n’ihi na, mgbe e chiri m ụkọchukwu, aga m enwe ike ịzọpụta ọtụtụ mkpụrụ obi ma aga m azọpụta nke m. Onye-nwe-ayi chọrọ, ana m erube isi. Anam agọzi Onye-nwe-ayi nnù abua na ọgu iri onye kpọrọm ka m mara ma hu ya n'anya. "
N'ime seminarị, dịka n'oge ọ bụ nwata, ndị gbara Canzii ama hụrụ ọkwa nsọ na ịdị umeala n'obi ya. Ọ na-edekarị: "Jizọs, achọrọ m ịghọ onye nsọ, n'oge na-adịghị anya na nnukwu".
Otu nwa akwukwo ibe ya kọwara ya dika "ọ na adị mfe ichi ochi, odi nfe, di nma, dika nwata". Nwa akwukwo n’onwe ya kwuru si na onye nzuko seminaria ahu “were obi oku huru Jisos oku ma nwekwaa obi oma n’ebe Nwanyi Anyi no”.
N’akwụkwọ ozi ikpeazụ nke o degaara nna ya, na December 26, 1929, Canzii na-ede, sị: “ee, ị ga-eme nke ọma ido onwe gị n’okpuru Uche Dị Nsọ nke Chineke, bụ́ onye na-ahazi ihe mgbe nile maka ọdịmma anyị. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na anyị ga-ata ahụhụ na ndụ a, nihina ọ bụrụ na anyị ewerela ihe mgbu anyị nye Chineke n ’ịtụle mmehie anyị na nke ndị ọzọ, anyị ga-enweta uru maka obodo eluigwe nke anyị niile chọrọ“.
N'agbanyeghị ihe mgbochi nye ọrụ ya, gụnyere ahụ esighị ike ya na nna nna ya ịghọ ọka iwu ma ọ bụ dọkịta, Canzii alaghị azụ ịgbaso ihe ọ maara na ọ bụ uche Chineke maka ndụ ya.
Ná mmalite 1930s, seminarị ahụ na-eto eto dara ọrịa ụkwara nta wee nwụọ na Jenụwarị 24 mgbe ọ dị afọ 15.
Emeghere ihe kpatara ya maka iti ihe na 1999 na 21 Jenụwarị Pope Francis kwupụtara na nwata ahụ "kwesịrị nsọpụrụ", ebe ọ biri ndụ "omume ọma".
Nwanne nwoke nke Canzii, Pietro, kwagara United States na 1941 wee rụọ ọrụ dị ka ịkwa akwa. Tupu ọ nwụọ na 2013, mgbe ọ dị afọ 90, ọ gwara na 2012 na Catholic Review nke Archdiocese nke Baltimore banyere nwanne ya nwoke tọrọ ya.
Ọ sịrị: “Ọ bụ ezigbo mmadụ. “Amaara m na ọ bụ onye nsọ. Ama m na ụbọchị ya ga-abịa. "
Pietro Canzi, onye dị afọ iri na abụọ mgbe nwanne ya nwoke nwụrụ, kwuru na Pasqualino "na-enye m ezigbo ndụmọdụ mgbe niile."